todkenews | रुघाले सताएर हैरान हुनुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी घरेलु उपाय रुघाले सताएर हैरान हुनुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी घरेलु उपाय
प्रकाशित मिती: २०७७ कार्तिक २८, शुक्रबार १६:३२
तातो तरल पदार्थ र फलफूल खानुहोस् : तातो पानी नियमति पिउँदा त्यसले बन्द भएको नाकलाई खुलाउन सहयोग गर्छ । अहिले त स्थानीय बजारहरूमा तुलसी लगायतका जडीबुटी राखिएका चियाहरू समेत उपलब्ध छन् । त्यस्तै, फलफूलमा पर्याप्त भिटामिन हुने भएकाले सबैखालका रोगसँग लड्दछ । तिनको सेवन गरे झनै राम्रो । यसर्थ, रुघाखोकीको बेला खासगरी सुन्तलजन्य फलफुल अत्यन्त लाभकारी हुन्छ ।एजेन्सी
२०७७ कार्तिक २८, शुक्रबार १६:३२